Indlu epholileyo yelog ye-17 km-Gatten
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBente
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uBente iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu epholileyo endala enelog enendalo ngaphandle komnyango. Kukho ikhitshi elitsha elinomatshini wokuhlamba izitya kunye negumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba. Umabonwakude (umsinga) ‘WiFi, iCD player kunye nerediyo. Isihlomelo esitsha esineebhedi ezi-2. Indlu inamagumbi ama-3 aneendawo zokulala ezimbini kwindawo nganye, igumbi lokuhlala elinesitovu esibaswayo ngamaplanga kunye ne-air conditioning kunye ne-conservatory. I-trampoline, i-barbecue kunye ne-campfire egadini. Ibekwe malunga neemitha ezingama-900 ukusuka elunxwemeni kunye neejethi ezimbini. Umyezo ulahleka ehlathini apho kukho iindlela ezininzi kunye neenkumbulo ezivela kwi-Stone Age.
Nali uxolo noxolo kwakunye nethuba lokubaleka okanye uhambe uhambo olude.
Kukho imiqamelo kunye needuvethi, kodwa khumbula ukuzisa ilinen kunye neetawuli.
Ukuqashiswa kwelinen kunye neetawuli kunokuvunyelwana, njengoko ukucoca kokugqibela kunokuvunyelwana. Kukho uluhlu lwamaxabiso olu khetho.
Ubuninzi babantu aba-6 kunye nobuncinci bokuhlala ubusuku obu-3.
Siyazingca ngokwenza iindwendwe zethu zizive zamkelekile kwaye zibe nethuba lokuphumla kunye namava endalo.
Indlu ise-Ertebølle kwaye elona thuba likufutshane lokuthenga lise-9640 Farsø malunga neekhilomitha ezili-12 ukusuka e-Ertebølle, apho kukho iivenkile ezininzi zegrosari. E-Ertebølle liziko leStone Age elifanele ukutyelelwa. Ngexesha lasehlotyeni, kukho iziganeko ezininzi kwiintsapho ezinabantwana kwiziko. Kwi-Trend 4-5 km kukho ulwandle oluhle olunesanti ngaphandle kancinci ngaphandle yi-Rønbjerg apho kunokwenzeka ngesikhephe ukuya e-Livø (Izinja azivumelekanga ukuba zindwendwele i-Livø) Isikhephe esiya e-Livø sikwanazo iihambo apho ziphuma khona kwaye ufumana ithuba lokuba babone Seals elele kunye behlel.
Ke kukho ithuba lokudlala igalufa eGatten.
Ndiyafumaneka ukuze ndibuze imibuzo kunye nezikhokelo phambi kokufika kondwendwe nangexesha lotyelelo. Undwendwe kufuneka lulindele ukuba mna nomyeni wam sifike sichebe ingca.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Farsø